izifo gynecological zenzeka abesifazane, kungakhathaliseki ubudala babo. Lokhu kubangelwa imvelo abampofu, ezahlukene okuthelelana ngesifo esidluliselwa ngocansi noma ukulimala lapho bezalwa noma isisu. Empeleni, kunezindlela ezihlukahlukene izifo wesibeletho. Futhi ngokuvamile kakhulu indlela kuphela uvimbele ukudala ezinye izinkinga okubi nakakhulu ukuthinteka kokungenela kuhlinzwa.
Kuze kube muva nje, izifo ezihlukahlukene emkhakheni ngokocansi kwakungatholakala kuphela wamagciwane cauterization noma ezinye manipulations ezibuhlungu. Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, iye yasetshenziswa radiowave ngempumelelo coagulation wesibeletho - operation esheshayo nengebuhlungu, okuyinto eyenziwa, ngisho obeletha amantombazane.
Umthelela ephezulu imvamisa ngemisebe
Radio yokwelapha wave - ingenye yezindlela nephephile eliphambili lokwelapha pathologies kakhulu wesibeletho. Lots of izicubu amaseli bedle amagagasi shabalala ngaphandle incurring ahlabayo noma ukusha. kumiswa okungavamile nje kuhluke ngumuntu emisebeni enamandla wave emsakazweni. Phezu ukuhwamuka izindwangu imele ngazimbili lokushisa ephansi ikhuthaza coagulation (ukubekwa uphawu) namaseli semithambo.
Le nqubo kakhulu fast nengebuhlungu ngokuphelele. Radiowave coagulation wesibeletho ngeke kuyilimaze inyama ephilile futhi aqede yezinkinga post-op. At the site Imi kukhona izinqubo eziningana: ugongolo okusezingeni eliphezulu kanyekanye disinfects enxebeni amabhlogo ukopha. yokutakula postoperative kwenzeka ngokushesha, ngaphandle nezibazi noma izinguquko amafomu wesibeletho.
Le ndlela esingavamile kuyaphumelela futhi kuboniswa ukuthi abesifazane babo bonke ubudala abanezinkinga izifo zabesifazane, kanye namantombazane ayakhulelwa esikhathini esizayo.
Radiowave coagulation wesibeletho Kunconywa pathologies ezifana:
simila bartolinevyh nezindlala;
cervicitis ifomu ezingamahlalakhona;
warts, ama-polyp, papillomas;
Radio wave ugongolo ithuluzi best for izinqubo biopsy ngoba esolwa lesizalo zokugula Cancer uhlamvu.
coagulation Radiowave of ukuguguleka wesibeletho
Lapho sitholakele lolu hlobo lo msebenzi ngempumelelo kakhulu futhi has a izibikezelo esihle ukululama ngokugcwele. Ngemva contact ngenduku amagagasi kuya lesizalo endaweni lapho ukuguguleka komhlabathi, amaseli ezilimele uqale shabalala, ukwakha ifilimu obukhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, elingenamikhono ezingaphili basishulwe, kanye, izicubu onempilo ahlanzekile uhlala endaweni yayo.
Lapho ekwelapheni ukuguguleka ngokuvamile isetshenziswa ngokunembile radiowave coagulation wesibeletho. Uphenyo odokotela owayengifundela lo msebenzi iziguli zabo ukuqinisekisa ukusebenza yayo. Emva inqubo nhlobo lingekho cut izicubu ukuthi ngaphandle isibanda ekwakhekeni, kanjalo nokunciphisa yezinkinga imvelo ezithathelwanayo.
Ngaphambi inqubo isiguli kufanele ibhekane umnyuziki luhlolo ngumuntu wezifo zabesifazane. Ucwaningo oluningana kuhlanganisa:
Ukuhlolwa esitulweni izifo zabesifazane ehhovisi;
ukuhlaziywa pap smear;
ukuhlolwa zokuzala ipheshana izifo;
analysis eningiliziwe igazi.
Lapho eveza noma yiziphi izifo (mycoplasma, chlamydia, herpes) babe ngaphansi ukwelashwa futhi iqedwa uphenyo wesibeletho izicubu biopsies.
Ngemva ukuhlolwa kwesidumbu owesifazane efika udokotela ngesikhathi kusuka 5 x ngosuku lwe-14 umjikelezo kwakhe kokuya esikhathini. Field sangasese futhi endaweni lapho ugongolo sizothinta amagagasi kusetshenzwe isinqandakuvunda esebenzayo izinzwa wendawo noma jikelele. Khona-ke, idivayisi ekhethekile noma coagulated excised izicubu onesifo.
Ngemva kokuhlinzwa lowo wesifazane engathandi badinga ukulaliswa esibhedlela. Ingahamba ekhaya, esethole lodokotela kunesidingo.
Noma yimuphi ukuxhaphaza wesibeletho ziqhutshwa ngokuqinile ekuqaleni umjikelezo wokuya esikhathini. Ubude inqubo namandla ngamagagasi omsakazo incike kobukhulu kanye izici isifo.
Coagulation iziyaluyalu at kwegciwane kwenziwa ngokushesha emva nokuphathwa izinzwa esifundeni wesibeletho. Ubude besikhathi sokwelashwa - amaminithi amahlanu.
Lapho uhlamvu ezikhonjwe pathologies precancerous ezifana warts noma dysplasia kwesibeletho, ukususwa izicubu abathintekayo ikhiqizwa. Inqubo kuthatha imizuzu efika ku-10. Ekupheleni cluster yakhe encane walulama ngemva kokuhlinzwa, ethunyelwe cwaningo.
Naphezu ukutholakala kanye nokuphumelela inqubo, wesibeletho radiowave coagulation akunakwenzeka khona:
izinga lokushisa emzimbeni ephakeme;
izifo noma okukhulu ukhalo elincane;
metal izimila emzimbeni;
coagulation wesibeletho amagagasi indlela Kuyinto omunye imisebenzi engcono ukuqeda pathologies ezehlukene.
Danaus inqubo elandelayo kunezinzuzo eziningana:
kunemidanti kobuhlungu ngokuphelele;
amagagasi omsakazo lokufeza ukucutshungulwa olunembile amaseli ezilimele ngaphandle ezithinta izicubu zomzimba eziphilile;
isilonda ukuphulukisa kwenzeka ngokushesha, ngaphandle nezibazi;
indlela akusho ukukhiqiza nomthelela ongemuhle emkhakheni ezocansi ongaphumelela silisebenzise ekwelapheni pathologies e amantombazane asemancane nabesifazane ababonakala uhlela ukuphinda nokukhulelwa;
ukopha siqedwa ngokuphelele;
isilonda nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa akudingi ezengeziwe ukucutshungulwa ephulukisa ejenti;
ngemva coagulation wesibeletho ze sebenzisa ukusonteka wakhe;
ngesikhatsi operation radiowaves ukukhiqiza lokuhlanzisisa umphumela, ekuqedeni ukutheleleka;
kule nkathi nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa, ingozi edema nokuvuvukala lincane.
Izincomo emva coagulation radio wave
Kwaphela iminyaka emibili, njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, owesifazane kufanele ibhekane luhlolo udokotela. Ngokuvamile emva izinqubo Uchwepheshe kuyabekwa suppositories for ukuvuselelwa kanye nokubuyiselwa egcwele evamile imvelo lwesitho sangasese sowesifazane.
Emva impatho izinsuku ezingu-14 akulona ukugeza Kunconywa kunoma iyiphi amanzi evulekile, swimming pool, sauna. Abesifazane kufanele ugweme zokugeza hot too, imithwalo esindayo noma ezemidlalo asebenzayo.
Ingakapheli inyanga noma ezimbili kunconywa ukuqedela lonke ngokobulili. Njengoba izinqubo ezengeziwe yokutakula kungenzeka udokotela wakho aqokwe douching. Ukusetshenziswa tampons akuvunyelwe ngalesi sikhathi.
Radiowave coagulation wesibeletho: nemithelela
Ngosuku lokuqala ngemuva kokuhlinzwa kuyenzeka ubuhlungu edonsa, kokuya esikhathini-like. Kulokhu, lo Udokotela angase anikeze isiguli umuthi wezinhlungu. Smearing ukopha ukuvela ngemuva kwezinsuku ezingu-7 ngemva kosuku okwakhishwa ngalo radiowave coagulation wesibeletho kwenziwa.
Uketshezi ngokuvamile hhayi obuningi, sukrovichnye they ingahlala izinsuku 20-25. Ngalesi sikhathi kumele ziphathwe ekusetshenzisweni kwamakhandlela, udokotela kunikezelwe.
Ekupheleni osenyameni kokuya esikhathini kuqala, okungase libhekene kakhulu kunokujwayelekile. Uma ukopha sinzima, kukhona amahlule sebuhlungwini obunzima, kudingeka ngokuphuthumayo okubiza udokotela.
Kufanele batshele uma ngokucijile ekuphumeni lokushisa komzimba noma 3 amaviki ngemuva kokuhlinzwa iqala osenyameni nge nephunga ezingezinhle. Phezu ukuthola izimpawu ezinjalo, abesifazane kufanele afune lwezokwelashwa olusheshayo.
Ngokuyinhloko, nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa esikhathini yokutakula wayesekhothama kahle kwabesifazane abaningi. Izinkinga iye yabonakala e 1% eziguli eziqhutshwa njengoba ukopha, ukuvaleka ngokushesha iziteshi noma lesizalo ukutheleleka.
Namuhla, indlela emnene kakhulu futhi ngempumelelo ukubhekana eziningi izifo sphere ngokobulili kuyinto coagulation radiowave wesibeletho. Izibuyekezo abesifazane ngubani kwavele lo msebenzi waba umlingisi omuhle. Le nqubo esheshayo, ngaphandle esibhedlela kanti e-nesineke ukwelashwa.
Ezinye iziguli zitshengisa ukuthi zehlile okuzala. Izinguquko ezinjalo, ngakho ezingase zenzeke endaweni yakini, uma ngesikhathi inqubo isuswe Ingcenye eqakathekileko yomsebenzi wehlelo kwesibeletho noma coagulation kwenziwa ngokuphindaphindiwe.
Futhi emva kokuhlinzwa kungenzeka kwephulwa ukuminyana futhi izindawo zemvelo isikhwehlela lwesitho sangasese sowesifazane. Kulokhu, odokotela linqume ukwelashwa okwengeziwe neluhlolo ozolandela.
Ukulunywa, evutha, ukoma endaweni elisondelene abesifazane: ukwelashwa. Izimali ezivela ukoma endaweni obuseduze
Ikhanda ecaleni. Ngenduku ukudoba ehlobo